HONOR Band5ဝယ်ယူရန်: ကြီးမားသော အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ AMOLED မျက်နှာပြင်| HONOR တရားဝင်ဝပ်ဆိုဒ်(ျမန္မ)
MM ကုန္ပစၥည္း ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား HONOR BAND 5
အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ AMOLED မျက်နှာပြင်
သုံးစွဲရမြန်ဆန်လွယ်ကူရန်အတွက် ရောင်စုံစာသားနဲ့ အိုင်ကွန်များ ပြသော HONOR Band 5ရဲ့ အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ AMOLEDမျက်နှာပြင်
၀.၉၅လက်မ အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ AMOLED မျက်နှာပြင်
တစ်လက်မလျှင် ပုံရိပ်ကွက်၂၈၂အထိ ပါရှိ
အိမ်၊ ရုံး၊ အားကစားခန်းစသောနေရာများနဲ့ အလိုက်ပြောင်းလဲလို့ရသော ဆန်းသစ်စမတ်ကျတဲ့ နာရီမျက်နှာပြင်ဒီဇီုင်းများကို HONOR Clock Face Store၁ တွင်ရရှိနိုင်ခြင်း
နှလုံးခုန်နှုန်းဖတ်ယူခြင်း ပိုမိုတိကျစေရန် AI-driven algorithmsစနစ်နှင့် ဆက်တိုက်ဖတ်ယူမှတ်သားနိုင်ရန် အနီအောက်ရောင်ခြည်နည်းစနစ် TruSeen™ 3.0 တို့ကို အသုံးပြုထားသည်
SpO2 သွေးအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို တိုင်းတာပေးခြင်း၂
HONOR Band 5ရဲ့ SpO2 တိုင်းတာခြင်းသည် သွေးကြောအတွင်းရှိ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်နှုန်းပမာဏကို ဖတ်ယူပေးသောကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပိချိန်နဲ့ ကုန်းမြေအမြင့်ပိုင်းတွင် သင့်ခန္ဇာကိုယ်အခြေနေကို သိနိုင်သည်
အဆင့်မြင့် အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းများကို သေချာခြေရာခံ မှတ်သားဖော်ပြနိုင်သာမက ကိုယ်ပိုင်ချမှတ်ထားသော အားကစားplanများကို ပြည့်စုံစွာခြေရာခံပေးပြီး နက်နဲပြင်းထန်သော အားကစားအစီအစဉ်အတွက် နှလုံးခုန်နှုန်း, လေ့ကျင့်ချိန်, အကွာဝေး, အမြန်နှုန်း, ကယ်လိုရီ, နှင့် အစရှိသော ဒေတာရလဒ်တွေကိုဖော်ပြပေးသည်။
* Magic UI/IOS 9.0နှင့်အထက် အထောက်ပံ့ပေးသည်
HONOR Band 5သည် ရေအနက် ၅၀မီတာ၃ ထိရေစိုခံနိုင်ရုံသာမက ရေကူးအားကစားကို ထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် ရေချိုးနေစဉ်နှင့် ရေကူးချိန်တွင် ဝတ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ဝင်ရိုးခြောက်ခုအာရုံခံစက်သည် ရေကူးနည်း လေးမျိုးထိ အသိမှတ်ပြုနိုင်သည်-- လက်ပစ်ကူး, ပက်လက်ကူး, ဖားကူး, လိပ်ပြာကူး-- အမြန်နှုန်း, အကွာဝေး, ကယ်လိုရီနှင့် SWOLF၄ အမှတ်ကိုလည်းမှတ်သားပေးသည်။.
HONOR Band 5တွင် HUAWEI TruSleepနည်းပညာပါဝင်သောကြောင့် အမှန်တကယ်အိပ်မော်ကျချိန်တွင်းရှိ အိပ်စက်ခြင်း အရည်အသွးကို မှတ်သားဖော်ပြနိုင်ရုံသာမက နေ့စဉ်အိပ်စက်ခြင်းအလေ့အထများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးပြီး ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်သော ပိုမိုကောင်းမွန်သော အိပ်စက်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် ၂၀၀ ကျော်ကို အကဲဖြတ်ပေးသည်။၅
စမတ်ကျကျ အဆင်ပြေပြေ ပြုလုပ်ပေးခြင်း
ဖုန်းထားတဲ့နေရာမေ့နေလား?စိတ်ပူစရာမလိုဘူး. ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဖုန်းကို Bluetooth ဧရိယာအတွင်းအလွယ်တကူရှာဖွေပေးလိမ့်မယ်. လက်ကောက်ဝတ်လေးမှလိုက်ရုံနဲ့ မက်ဆေ့ချ်ရောက်ရှိမှုသာမက အခြားnotificationတွေကို ကြည့်နိုင်ပြီး ဆဲလ်ဖီး (သို့) အဖွဲ့လိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ခြင်း *.
* Magic UI ဖုန်းများသာ အထောက်ပံ့ပေးခြင်း
system-level optimization နည်းစနစ်သုံး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဘက်ထရီကြောင့် အားတစ်ခါသွင်းရုံဖြင့် AMOLED မျက်နှာပြင်သည် stand by ၁၄ရက်ကြာခံသည်။ နှလုံးခုန်နှုန်း နှင့် အိပ်စက်ခြင်းတိုင်းတာမှုကို ၂၄နာရီအဆက်မပြတ် မှတ်သားရန်ဖွင့်ထားပါက ဘက်ထရီအား ၆ရက်ကြာခံသည်။ သုံးစွဲမှုနှင့် အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ဘက်ထရီကြာရှည်ခံမှု ကွဲပြားမှုရှိသည်။၇
၁. HONOR Clock Face Storeသည် Androidဗားရှင်းတွင်သာရရှိနိုင်ပြီး OTA upgradeမှတစ်ဆင့်အထောက်ပံ့ပေးသည်. ဒေသအလိုက် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။
၂. SpO2 သွေးအောက်ဆီဂျင်ပမာဏတိုင်းတားခြင်း ရရှိမှုသည် ဒေသအပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုရန်မဟုတ်ပါ။ ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုသပေးခြင်းနှင့် ကာကွယ်ပေးခြင်းလည်း မရည်ရွယ်ပါ။ တိုင်းတာပေးသောဒေတာအချက်အလက်များသည် ကိုယ်ရေကိုယ်တာ ကိုးကားဖို့အတွက်သာဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို OTA မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်မည်။
၃.ISO standard 22810: 2010 ကို အခြေခံထားသောကြောင့် ရေအနက် ၅၀ မီတာထိ ရေခံနိုင်မှုရှိပြီး ဝတ်ဆင်ထားပြီး ရေကူးခြင်းနှင့်လက်ဆေးကြောခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ပင်လယ်ရေ(ဆားငန်ရေ)ထဲတွင် ရေကူး/အသုံးပြုပြီးပါက စမတ်နာရီကို ရေသန့်ဖြင့်ဆေးကြောပြီး ခြောက်တွေ့အောင် လုပ်ပါ။
၄.SWOLF ("Swin Golf"၏အတိုကောက်) ဆိုသည်မှာ အကွာအဝေးတစ်ခုရှိ ကူးခတ်ချိန်နှင့် ကူးခတ်သည့်အရေအတွက်ကို ပေါင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ-- ၂၅ကိုက်အတွင်း ကူးခတ်ချိန် ၃၀စက္ကန့်နှင့် ကူးခတ်သည့်အရေအတွက် ၂၀ကြိမ်၏ SWOLFသည် ၅၀ ဖြစ်သည်။
၅, ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘာသာစကား ၄၂ မျိုးထိ အထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပိုမိုတိကျသောဘာသာစကား အချက်အလက်များအတွက် ဘာသာစကားစာရင်းသို့။
၆.တေးဂီတ ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် Android 5နှင့်အထက်ရှိ စမတ်ဖုန်းများတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အောက်ပါ အပလီကေးရှင်းများကို အထောက်ပံ့ပေးသည်-- Shazam, VLC for Android, Google Play Music, YouTube, Tube Go, Spotify, Audify, KKBOX, Blackplayer, Pulsar, and Huawei Music. Remote Music Control will come later via OTA.
၇.ဒေတာများသည် HONOR ဓာတ်ခွဲခန်း၏ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအပေါ်အခြေခံထားသည်။ အမှန်တကယ် သုံးစွဲသော လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်မူတည်ပြီး ဘက်ထရီကြာရှည်ခံမှု ကွဲပြားသည်။ HONOR TruSleep, TruSeen™ 3.0 နှင့် မျက်နှာပြင်အော်တိုလင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိတ်ထားပါက ပုံမှန်ဘက်ထရီကြာရှည်ခံနိုင်မှုသည် ၁၄ရက် ဖြစ်သည်။
၂.အချို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ သုံးစွဲနိုင်မှုသည်ဒေသအလိုက်ကွဲပြားနိုင်သည်။ အထက်ပါစာမျက်နှာများရှိကုန်ပစ္စည်းပုံနှင့်ပြသထားသောအကြောင်းအရာလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကိုးကာရန်သာဖြစ်သည်။ တကယ်မြင်တွေ့သုံးစွဲနိုင်သည့် ဤထုတ်ကုန်၏ အချက်အလက်များ (ပစ္္စည်းပုံစံ၊ အရောင်နှင့်အရွယ်အစားအပါအဝင်) နှင့် အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ချက်များ (နောက်ခံ၊ UI နှင့်အိုင်ကွန်များအပါအဝင်) ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။
၃.အထက်ပါစာမျက်နှာများရှိအချက်အလက်အားလုံးသည် သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေတစ်ခုအောက်တွင် HONOR ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများမှတဆင့် ရရှိသောသီအိုရီတန်ဖိုးများဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အချက်လက်များကို လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဖော်ပြထားသော အချက်လက်များသည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီ၊ ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း၊ အသုံးပြုမှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။ ဒေတာအားလုံးသည် တကယ်အသုံးပြုပေါ်တွင် မူတည်သည်။
၄.အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ရန် ထုန်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် အသုတ်, ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပံ့ပိုးပေးသောအချက်လက်များ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်ကြောင့် ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်, လုပ်ဆောင်ချက်အင်္ဂါရပ်များကို ပိုမိုတိကျနိုင်ရန်အတွက် HONOR သည် အထက်ပါစာမျက်နှာများတွင်စဖော်ပြထားသောအချက်များနှင့်ရုပ်ပုံများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများရှိနိုင်သည်။ သို့မှသာ တကယ့်လက်တွေ့ထုတ်ကုန်၏ စွမ်းဆောင်ချက်, လုပ်ဆောင်ချက်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်လက်များကို ပြောင်းလဲချိန်ညှိခြင်းပြုလုပ်ပါက ထပ်မံအသိမပေးတော့ပါ။
၅. HUAWEI TruSleep မှထောက်ပံ့ပေးသော ဘာသာစကားစာရင်း--
တရုတ်, အမ်ဟာရစ်, အာရဗစ်, အက်စမီစ်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, ဂရိ, အင်္ဂလိပ် (UK), အင်္ဂလိပ် (US), စပိန် (စပိန်), စပိန် (ဘရာဇီး)၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂူကြရတီ၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ကန်နာဒါန်၊ ကိုးရီးယား၊ မတီလီ၊ မော်လီ၊ မလေးရာလမ်၊ မွန်ဂို၊ မာရသီ၊ မလေး၊ နော်ဝေး၊ ဒတ်ခ်ျ၊ အိုရီရာ၊ ပန်ချာပီ၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး)၊ ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂီ)၊ ရိုမေးနီးယား၊ ရုရှား၊ ဆွီဒင်၊ ဆွာဟီလီ၊ တမီးလ်၊ တီလီဂု၊ ထိုင်း၊ တူရဂီ၊ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ် (ဟောင်ကောင်)၊ တရုတ် (ထိုင်ဝမ်)